Nairobi: Soomaaligii lagu waayay inuu ku lug lahaa weerarkii Westgate oo la afduubtay - Somali
BBC News SomaliBBC Somali
Dabalata More Sections
Nairobi: Soomaaligii lagu waayay inuu ku lug lahaa weerarkii Westgate oo la afduubtay
Video 3 minutes 48 seconds Video 3 minutes 48 seconds3:48
Play video Dilaaga daahsoon ee saameeyay Yemen from BBCDilaaga daahsoon ee saameeyay Yemen
Play video Dilaaga daahsoon ee saameeyay Yemen from BBC
Video 3 minutes 41 seconds Video 3 minutes 41 seconds3:41
Play video Duurjiigta Chernobyl: Muuqaal laga helay duurjoogta ku nool meel ay ka dhacday musiibo nukliyeer from BBCDuurjiigta Chernobyl: Muuqaal laga helay duurjoogta ku nool meel ay ka dhacday musiibo nukliyeer
Play video Duurjiigta Chernobyl: Muuqaal laga helay duurjoogta ku nool meel ay ka dhacday musiibo nukliyeer from BBC
Itoobiya: Gobolka Tigray oo dowladda uga digay inay xiriirka u jarto
Nairobi: Soomaaligii lagu waayay inuu ku lug lahaa weerarkii Westgate oo la la`yahay
Aabbe Sacuudiyaan ah oo baraha bulshada soo dhigay isagoo gabadhiisa garaacaya oo la xiray
Itoobiya: Korontada qorraxda laga dhaliyo oo laga hirgeliyay gobolka Doollo
Posted at 11:32 9 Oktoobar 202011:32 9 Oktoobar 2020
Coronavirus: Shiinaha oo cayaaraya 'diblomaasiyadda tallaalka'
Shiinaha waxaa ka go`an inuu sare u qaado saameynta uu ku leeyahay hay`adaha waaweyn ee ay taladu ka go`do sida Qaramada Midoobau iyo Ururka Caafimaadka Adduunka.
Taasi waxaa daliil u ah codsiga uu Shiinuhu ku doonayo in la taageero tallaalka Covax.
Mashruuca tallaalka coronavirus ayaa la doonayaa in sanadka soo socda ilaa labo milyan oo xirmooyin tallaal ah lagu gaarsiiyo dadka dunida ku nool, gaar ahaanna dalalka soo koraya.
Tallaabadan ayaa loo arkaa mid doblomaasiyadeed, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu soo celiyo sumcaddiisa ku aaddan wax ka qabashada xanuunka safmarka ah, ee dalkiisa ka soo bilowday.
Mareykanku tallaalka xanuunkan kuma bixinayo dadaal la ek kan uu Shiinuhu ku bixinayo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa WHO oo tallaalkan taageereysa ku tilmaamay inay tahay "musuqmaasuq".
Posted at 10:51 9 Oktoobar 202010:51 9 Oktoobar 2020
Afar iyo toban qof oo lagu dilay rabshado ka dhacay galbeedka Itoobiya
Afar iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerarro hor leh oo ka dhacay gobolka galbeedka Itoobiya ku yaalla ee Benishangul-Gumuz, sida ay sheegeen maamulka gobolka.
Afar qof oo la sheegay inay weerarka fuliyeen ayaa sidoo kale la dilay.
Waa weerarkii saddexaad ee loo geysto dad shacab ah tan iyo bishii September iyadoo isku dhacyada isirka ku saleysan ee ka dhaca dalkaas ay caqabado ku yihiin dowladda.
Rabshado ayaa weli ka taagan gobolkaas inkastoo saldhigyo booliis laga sameeyay, kaddib labo weerar oo hore oo ka dhacay kuwaasoo ay ku dhinteen dad dhowr ah oo ka soo kala jeeda qowmiyadaha Amxaarada iyo Agew.
In ka badan 40 saraakiil oo dowladda ka tirsanaa ayaa xilka laga qaaday markaas, halka 15 kalena lagu hayo baaritaan ku saabsan dayacaad amaba inay qeyb ka ahaayeen rabshadaha.
Maamulka gobolka Benishangul-Gumuz ayaa sheegay in mid ka mid ah dadkii weerarka ku dhintay uu ahaa ajnabi, balse lama shaacin dalka uu ka soo jeedo.
Sanad kaddib markii uu ku guuleystyay abaalmarinta Nobel Peace Prize, maamulka Ra`iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa weli wajahaya caqabado la xiriira rabshadaha ku saleysan isirka, gaar ahaan kuwii bilihii la soo dhaafay ka dhacayay galbeedka dalkaas.
Posted at 9:26 9 Oktoobar 20209:26 9 Oktoobar 2020
Degmooyinka fog fog ee dhulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin koronto la’aan, taas oo keenta in ay adeeg bixin kari waayaan goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee dawliga ahi. Haddaba, waxaa shalay xarigga laga jaray mashruuc ballaaran oo korontada qorraxda laga dhaliyo ah oo laga hirgeliyey degmada Qorilley ee gobolka Doollo. Hibo Axmed Cumar, oo ah ku xigeenka madaxa xafiiska isku xirka Dowlad Deegaanka, ayaa Axmednagaashe uga warantay mashruucan iyo waxa uu yahay.
Video caption: Quwadda korontada laga dhaliyo qorraxdaQuwadda korontada laga dhaliyo qorraxda
Posted at 8:33 9 Oktoobar 20208:33 9 Oktoobar 2020
Baraha bulshada ayaa la sheegay inay sii huriyaan tacaddiyada lagula kaco haweenka iyo gabdhahaImage caption: Baraha bulshada ayaa la sheegay inay sii huriyaan tacaddiyada lagula kaco haweenka iyo gabdhaha
Dowladda Sacuudiga ayaa shalay xirtay aabbe la sheegay inuu baraha bulshada soo dhigay muuqaal aad la iskula wadaagay, kaas oo muujinaya isaga oo gabadhiisa yar garaacaya.
Afhayeen u hadlay booliiska oo ku sugan Maka ayaa sheegay in ninkan oo ku jira da`da 40meeyada, uu iska duubay muuqaal isaga oo garaacaya gabadhiisa.
Muuqaalka oo labo daqiiqo iyo 19 seken ah ayaa laga arki karay gabadha oo xabadka u jiifta. Aabbaheed ayaa garaacaya, waxaa laga maqli karay iyadoo oyneysa kana baryeysa inuu joojiyo.
Inkastoo aysan weli maxkamaddu xukmin in kiiskan uu la xiriiro tacaddiyaha lagula kaco haweenka iyo gabdhaha, haddana waxaa dalal badan ka dhaca tacaddiyo ay gabdhaha kala kulmaan xubno qoysaskooda ka tirsan.
Bishii July, dibadbaxyo ayaa ka dhacay dalka Jordan ee ay Sacuudiga deris yihiin, kaddib markii uu aabbe dilay gabadhiisa.
Posted at 7:59 9 Oktoobar 20207:59 9 Oktoobar 2020
Liibaan Cabdullaahi Cumar ayay maxkamaddu sii deysay markii lagu waayay caddeynImage caption: Liibaan Cabdullaahi Cumar ayay maxkamaddu sii deysay markii lagu waayay caddeyn
Waxaa lagu soo warramayaa in la la`yahay Liibaan Cabdullaahi oo ka mid ahaa saddex nin oo loo heystay weerarkii dhismaha laga dukaameysto ee Westgate, kaas oo maxkamaddu ay sii deysay labo maalmood kahor markii lagu waayay caddeyn.
Sida laga soo xigtay ha`adda u doodad xuquuqda Muslimiinta Kenya. Liibaan ayaa markii ay maxkamaddu sii deysay wuxuu soo raacay gaari ay la saarnaayeen xubno ka tirsan qoyskiisa, kaddibna waxaa waddada u galay oo gaariga kala degay rag hubeysan.
Qareenka Liibaan Mbugua Mureithi ayaa mid ka mid ah telefeshinnada Kenya u sheegay in raggan ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka.
Booliiska ayaa ka gaabsaday arrintaas.
Arbacadii, labo nin oo u dhashay Kenya ayay maxkamaddu ku xukuntay inay gacan ka geysteen weerarkii sanadkii 2013 lagu qaaday dhismaha laga dukaameysto ee Westgate ee magaalada Nairobi, kaas oo ay ku dhinteen 67 qof.
Liibaan Cabdullaahi oo ah Soomaali qaxooti ku ah Kenya lana dhashay mid ka mid ah raggii weeraray Westgate, wuxuu ahaa eedeysanihii saddexaad maxkamadda ayaana sii deysay markii lagu waayay caddeyn.
Posted at 6:40 9 Oktoobar 20206:40 9 Oktoobar 2020
BBC/Girmay GebruCopyright: BBC/Girmay Gebru
Madaxweyne ku xigeenka gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla ee Tigray ayaa ka digay in go`aanka aqalka sare ee ah in gobolkaasi laga goosto taageeradii la siin jiray ay ka sii dari doonto xiisadda dalkaasi ka taagan.
“Xukuumaddu waxay gobolka Tigray ka saareysaa nidaamka federaalka taasna waa mid aan gebi ahaanba la aqbali karin,” ayuu yiri Abraham Tekeste.
Hadalka ninkan ayaa imaanaya kaddib markii Aqalka Sare ee dalkaas uu ugubaaqay Ra`iisul Wasaare Abiy Axmed in xukuumaddu ay maalgelinta ka goosato dowladda Tigray kaddib markii uu gobolku qabtay doorashooyin-goboleedka kana dhega adeygay amarka guddiga doorashooyinka.
Guddiga doorashooyinka ayaa qaadacay dhammaan doorashooyinka uu gobolku qabsaday.
Balse dowladda Tigray ayaa diidday go`aankaas, toddobaadkii la soo dhaafayna waxay ku dhawaaqday inaysan qaadan doonin amarka dowladda federaalka, iyadoo sheegtay in xilligeeda uu dhammaaday.
Afhayeenka Aqalka Federaalka ee Itoobiya Adem Farah ayaa ku eedeeyay dowladda Tigray inay si sharci darro ah u qabatay doorashooyinka gobolka.
Madaxweyne ku xixgeenka dowladda Tigray ayaa sheegay in dowladda federaalka ay sanadkii hore gobolkaas ka uruurisay 7bn oo Birta Itoobiya ah ($1.9m; £1.4m) isla markaana ay qorsheyneyso inay sanadkaanna ka uruuriso 8bn.
Lacagta ayaa laga uruuriyaa gobollada kale waxaana loo qeybiyaa dowlad-goboleedyada, iyadoo la marayo hannaan la isku raacsan yahay.
Wuxuu ugu baaqay dowladda inay u dhaqanto si mas`uuliyad leh, oo aysan qaadin tallaabooyin sababi kara in dadweynaha Tigray ay waayaan adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha.
Dowladda gobolka Tigray ayaa u yeertay xubnaha kaga jira baarlamaanka iyo dowladda federaalka. Qaarkood ayaa haatanba gaaray caasimadda gobolkaas, Mekelle.
Posted at 13:55 8 Oktoobar 202013:55 8 Oktoobar 2020
Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geeriga Cali Khaliif Galeyr
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ra'isalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo maanta Jigjiga ku geeriyooday.
Farmaajo ayaa sheegay in marxuumku "uu door muuqda kaga jira sooyaalka Soomaaliya."
"Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa faray Xukuumadda Federaalka Soomaaliya in la magacaabo Guddi Qaran oo ka shaqeeya Aas-Qaran oo loo sameeyo Marxuumka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed," ayaa lagu yiri war qoraal ah o ka soo baxay madaxtooyada
Posted at 13:36 8 Oktoobar 202013:36 8 Oktoobar 2020
Trump oo diiday inuu ka qeybgala doodda musharraxiintaa oo lagu qaban lahaa qaab online ah
Madaxweyne Donald Trump ayaa iska diiday inuu ka qeybqaato dood qaab online ah loo qabanaya oo uu la geli lahaa ninka ay ku loolamayaan xilka madaxtinnimada ee Joe Biden.
Mar sii horreysay, guddiga qaban qaabinayay doodan oo lagu wada inay dhacda 15 Oktoobar ayaa sheegay in loo baddelay qaab online ah si looga baaqsado kulan fool ka fool ah.
Go’aanka guddiga ayaa ka dambeeyay markii Mr Trump laga helay xannuunka Coronavirus. Waxaa lagu daweeyay isbitaalka, waxaana la sheegay inuusan hadda qabin calaamadaha xannuunkaasi.
Masuuliyiin u hadlay Joe Biden ayaa haseyeeshee sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka qeybgala dooda.
Doodii horay u dhemxartay Biden iyo Trump ayaa lagu tilmaamay mid qas badanImage caption: Doodii horay u dhemxartay Biden iyo Trump ayaa lagu tilmaamay mid qas badan
Posted at 12:13 8 Oktoobar 202012:13 8 Oktoobar 2020
Coronavirus oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Afrika ee sida adag u soo kabanayay
Bankiga Adduunka ayaa sheegay in xanuunka safmarka ah ee coronavirus uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Afrika ee sida adag u soo kabanayay tobankii sano ee la soo dhaafay.
Wuxuu bankigu sheegay in saameyntaas ay sababi doonto in dhaqaalaha Afrika uu sanadkan hoos u dhaco 3.3%.
Balse bankiga ayaa sheegay in sanadka soo socda uu soo kaban karo dhaqaalaha.
Afrika ayaa iska caabbisay xanuunka, iyadoo kiisaska fayraska ee qaaradda ay ka yar yihiin inta badan kuwa laga soo sheegayo qaaradaha kale.
Balse xayiraadaha looga gol leeyahay yareynta faafitaanka fayraska ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay dalal badan, sida Koofur Afrika.
Bankiga Adduunka ayaa ka digay in ilaa 40 milyan oo Afrikaan ah ay wajihi karaan saboolnimo daran.
Posted at 11:03 8 Oktoobar 202011:03 8 Oktoobar 2020
War deg deg ahCali Khaliif Galeyr oo ku geeriyooday Jigjiga
Cali Khaliif GaleyrImage caption: Cali Khaliif Galeyr
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya inuu goor dhow halkaasi ku geeriyooday Cali Khaliif Galeyr.
Geerida Cali Khaliif oo mar soo noqday Ra`iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaa BBC-da u xaqiijiyay Cumar Faaruuq Warfaa, oo ah wasiir ku xigeenka madaxtooyada Dowlad Deegaanka.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in marxuumka uu ku xannusanaa Jigjiga labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Posted at 9:38 8 Oktoobar 20209:38 8 Oktoobar 2020
Hoggaamiyeyaasha Masar iyo Kenya oo ka wada hadlay muranka ka taagan biya-xireenka Nile
State House KenyaCopyright: State House Kenya
Madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga wada hadleen muranka ka taagan biya-xreenka ay Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile, sida laga soo xigtay saraakiisha Masar.
Labada hoggaamiye ayaa Axaddii ku kulmay maagalada Qaahira, xilli madaxweyne Kenyatta uu ka soo laabtay Faransiiska.
War ka soo baxay afhayeen u hadlay Masar ayaa lagu sheegay in shirka diiradda lagu saaray danaha labada dal gaar ahaan arrinta biya-xireenka Nile.
Kenya ma aysan soo hadal qaadin arrinta biya-xreenka iyadoo ku gaabsatay in madaxda ay ka wada hadleen danaha labada dal, oo ay ku jiraan nabadda iyo ammaanka gobolka, ganacsiga iyo sida ay Afrika wax uga qabaneyso xanuunka Covid-19.
Biya-xireenka ay Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile ayaa lagu wadaa inuu quwad koronto siiyo ilaa 65 milyan oo qof oo Itoobiya ku nool.
Masar waxay inta badan biyaheeda ka heshaa webiga Nile, waxayna dhowaan ka digtay in biya-xireenku uu khatar ku yahay biyaheeda.
Kenya waxay korjoogto ka tahay guddi dhexdhexaadin ah oo Midowga Afrika uu u saaray xallinta lhilaafka Masar iyo Itoobiya.
Posted at 8:56 8 Oktoobar 20208:56 8 Oktoobar 2020
Orodyahan jebiyay rikoor 15 sano ka yaallay tartanka orodka 10,000m
Orod yahanka Joshua Cheptegei oo u dhashay dalka Uganda ayaa sanadkan qaaday koobka oroddada 10,000m ee ragga, halka Letesenbet Gidey oo Itoobiya u dhalatayna ay jebisay rikoorka oroddada 5,000m ee haweenka.
Tartankan oo ka dhacay magaalada Valencia ee dalka Spain ayaa Cheptegei, oo 24 jir ah, wuxuu orodkaas ku dhammeystay 26 daqiiqo iyo 11.00 seken, isagoo koobka ka qaaday Kenenisa Bekele oo muddo 15 sano ah haystay rikoorkaas, waxaana u dhaxeeyay farqi ah lix seken.
Gidey, oo 22 jir ah, ayaa iyadana orodkaas ku soo afjartay 14 daqiiqo iyo 6.62 seken, waxayna koobka ka qaadday Tirunesh Dibaba oo sanadkii 2008 ku soo afjartay 14 daqiiqo iyo 11.15 seken.
"Waan faraxsanahay," ayay tiri Gidey, oo sidoo kale tartanka orodka 10,000m oo ay sanadkii hore kaga qeyb gashay Dooxa ku guuleysatay billadda qalinka.
Cheptegei ayaa guulo is daba joog ah ka soo hooyay tartanka oroddada muddo toban bilood gudahood ah. Bishii December ee sanadkii hore wuxuu ku guuleystay tartanka orodka 10km iyo kan 5km oo uu ku guuleystay bishii February.
Sidoo kale bishii August, wyxyy jebiyay rikoor kale oo uu Bekele heystay muddo 16 sano ah, waana tartanka 5,000m, waxaana u dhaxeeyay farqi labo seken ah.
Posted at 8:23 8 Oktoobar 20208:23 8 Oktoobar 2020
Itoobiya: Nin la sheegay inuu dhimirka ka xanuunsan yahay oo afar qof oo isku qoys ah ku dilay Deegaanka Soomaalida
Carruurta oo dhaawac halis ah uu gaaray ayaa lagu daweynayaa isbitaalka JigjigaImage caption: Carruurta oo dhaawac halis ah uu gaaray ayaa lagu daweynayaa isbitaalka Jigjiga
Tuulada Faarax Liibaan oo qiyaastii 18km u jirta degmada Xarshin oo ka tirsan Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in nin la sheegay indhimirka uu ka xanuunsan yahay uu afar qof oo hal qoys ka wada tirsanaa ku dilay shan kalena uu ku dhaawacay, sida ay xaqiijiyeen maamulka degmada.
Ninkan oo ku hubeysnaa faas ayaa galay guriga qoyska, isagoo kaddib dilay hooyadii, aabbihii qoyska iyo labo carruur ah oo ay dhaleen.
Afar kale oo carruurta qoyskaasi ka tirsan ayuu sidoo kale dhaawac soo gaaray, waxaana haatan lagu dabiibayaa isbitaaalka guud ee magaalada Jigjiga, iyada oo carruurta dhaawac culus uu ninkaasi u geystay qalliin lagu sameeyey balse ay weli xaaladdooda liidato.
Dhacdadan ayaa deegaanka ka abuurtay naxdin. Ninkii dhibka geystay waxaa haatana gacanta ku haya booliska deegaanka.
Posted at 6:27 8 Oktoobar 20206:27 8 Oktoobar 2020
Nagorno-Karabakh: Iiraan oo ka digtay 'dagaal gobolka ka dhaca'
Madaxweyne Rouhani ayaa ku baaqay nabad iyadoo dagaal uu dhex marayo labo dal oo deris la ah IiraanImage caption: Madaxweyne Rouhani ayaa ku baaqay nabad iyadoo dagaal uu dhex marayo labo dal oo deris la ah Iiraan
Iiraan ayaa ka digtay in dagaalka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya dalalka ay deriska yihiin ee Azerbaijan iyo Armenia uu sababi karo dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca.
Madaxweyne Hassan Rouhani ayaa sheegay inuu rajeynayo in xasilooni uu ku soo dabaalo gobolka kaddib maalmo uu ka socdo dagaal culus oo ka bilowday gobolka Nagorno-Karabakh.
Gobolkan wuxuu rasmi ahaan qeyb ka yahay Azerbaijan balse waxaa ka taliya dad isir ahaan ka soo jeeda Armenia.
Dagaalka haatan socdan waa kii ugu xumaa muddo tobnaan sano ah, labada dhinac ayaana midba kan kale ku eedeeyay inuu isagu bilaabay.
Madaxweyne Rouhani ayaa sidoo kale sheegay inaan la aqbali karin madaafiic habow ah oo ku soo dhaca ciidda Iiraan.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday xilli ay soo baxeen warar sheegaya in madaafiic ay ku dhaceen xaafado ku yaalla xadka waqooyi ee ay Iiraan la leedahay Armenia iyo Azerbaijan.
Magufuli: Ri' baan ka helnay cudurka corona
Madaxweynaha Tanzania, John Magufuli, ayaa sheegay inuu dawo dhireed la sheegay inay daweyso cudurka Covid-19 uu ka soo dhoofsan doono dalka Madagascar.
Dal ku guuleystay daweynta dhammaan bukaanadii uu ku dhacay fayraska corona
Bukaankii ugu dambeeyay ee Cambodia ayaa laga daweeyay fayraska corona waxaana laga saaray isbitaalka, taasi oo dalkaasi ka dhigtay dal aanay haatan jirin qof qaba fayraska corona.
Fiiri qaabka uu jirkaaga isaga difaaci karo cudurka Corona
Cilmi baareyaal u dhashay Australia ayaa soo saaray afar qeybood oo ka mid ah unugyada difaaca jirka oo si toos ah ula dagaallamaya Covid-19, isla marka uu jirka soo galoba.
'Ninka adduunka ugu da'da weyn' oo ka kacay cudurka corona
Aba Tilahun, oo ay qoyskiisa sheegeen inuu jiro 114 sano, ayaa laga saaray isbitaalka kaddib markii la daweynayay muddo labo isbuuc ah.
Waddan u taag waayay maareynta meydadka Corona
Tirada dhimashada la shaaciyay Ecuador ayaa ahayd 403, balse kiisaska tirada dhimashada ee cusub ee hal gobol ayaa gaartay kumanaan qof.
Maxaa Soomaalida loogu cunsuriyeeyaa Corona?
Dalka Sweden oo ka mid ah qaaradda Yurub ayaa waxaa uu ka mid yahay dalalka uu aafeeyay feyriska Corona.